China ifektri Conveyer ifektri kanye nabaphakeli | Sofiq
Isetshenziswa kabanzi emishinini, esisekelweni, ekusanseni, ekhemistri, ezintweni ezisetshenziswayo, emandleni, ezimayini, nakwezinye izingxenye zomkhakha, i-Apron Conveyer yemodeli BLT uhlobo lwenhloso ejwayelekile yokuma kwemishini yokuhamba ngemishini.
Isetshenziswa kabanzi emishini, isisekelo, insimbi, ikhemistri, izinto zokwakha, amandla, izimayini, nezinye izigaba zomkhakha, i-Apron Conveyer yemodeli ye-BLT uhlobo lwenhloso ejwayelekile yemishini yokuthutha emishini. Kusetshenziswa ekuthuthweni kwezinto ezinkulu ezihlakazekile noma isisindo socezu olulodwa oluvumelana nezimo ezintweni ezinkulu, ubukhali, isisindo esisindayo, izinga lokushisa okuphezulu nokugqwala. Okwamanje, izinqubo ezinjengokupholisa, ukomisa, ukufudumeza, ukuhlanza nokuhlukanisa kungenziwa ngesikhathi sokuhamba.
Iphinifa Conveyer Ukuze High temepature Material Made In China
Plywood icala, plywood ugqoko, noma njengoba mfuneko yakho ekhethekile.
Umshini ungahlukaniswa. Lokhu kuzosisiza ukunciphisa isikhala sokuthutha.
Sizohlela indlela elula kakhulu yephakheji nezokuthutha.
Isikhathi sokulethwa izinsuku ezingama-30 ekutholeni idiphozi
Iphinifa elihambayo uhlobo lwensimbi ehambisa imishini. Kuyinto yokucubungula impahla eluhlaza noma imishini yenqubo yokukhiqiza eqhubekayo.
Ubude bayo bokuhambisa bungafinyelela kumamitha angama-40-80.
I-apron elihambayo liyidlulisa elihamba phansi, lingaba livundlile, litsheke lapho lihanjiswa khona. Isisetshenziswa esidlulisayo sepuleti lokudonsa ipuleti, hhayi amandla amakhulu kuphela, ukusebenza kahle okuphezulu, umsebenzi onokwethenjelwa.
Ifanele ukuhambisa ibhlokhi, i-particle ne-powder material.Ingasetshenziselwa ukuhambisa impahla ebukhali futhi eshisayo.
1) Isampula yesakhiwo, ukusebenza okuthembekile, isikhathi eside sokuphila, ukufakwa okulula kugcina.
2) Isikhathi sokuhambisa singafinyelela kumamitha angama-80.
3) Ingafinyelela ukuhambisa okuvundlile noma okuthambekele.
Ngokuqhathanisa nemodeli ye-BLT, i-Apron Conveyer yemodeli i-JYB ilungele ukuthutha ukusakaza okunzima.
Ukucaciswa Kwe-Apron Conveyer
Ububanzi Of Iphinifa (mm)
Ukuphakama komkhombe (mm)
Umthwalo Ovumelekile Wokudonswa (kg)
Ukuvunyelwa okuphezulu kuvumelekile β
Isivinini sokunyakaza (m / iminithi)
° 25 °
Ukulawulwa kwejubane kwe-0.8-6
Langaphambilini Ovundlile Ekubunjweni Machine Squeezing Sand Ekubunjeni flaskless Molding Line
Flask Isikhunta Machine, Semi-okuzenzakalelayo Molding Machine, Molding Ekubunjweni Flask, I-Sandbox, Punch Out Umshini, Flask Ukubumba,